Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Noraràn'i Canada ny sidina mpandeha mivantana rehetra avy any Maroc
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Miorina amin'ny torohevitra farany momba ny fahasalamam-bahoaka avy any amin'ny Public Health Agency of Canada, ny Transport Canada dia manome fampandrenesana ho an'ny Airmen fameperana ny sidina mivantana sy ny mpandeha mivantana any Canada avy any Maraoka ny 29 aogositra 2021 hatramin'ny 29 septambra 2021.
Fepetran'ny Transport Canada ny sidina mivantana rehetra momba ny sidina sy ny mpandeha mivantana mankany Canada avy any Maroc.
Ny fandraràna ny sidina maraokana dia manan-kery manomboka ny 29 aogositra hatramin'ny 29 septambra.
Manoro hevitra ny Kanadiana hialana amin'ny dia lavitra tsy ilaina any ivelan'i Kanada
Kanada dia manana ny sasany amin'ireo fepetra henjana indrindra amin'ny fivezivezena sy ny sisin-tany manerantany, ary manao ny laharam-pahamehana amin'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny kanadiana amin'ny alàlan'ny fanohizana ny fomba mifono risika sy refy hamohana ny sisin-tany indray.
Toy ny singa hafa rehetra amin'ny valin'ny COVID-19 any Canada, ny fepetra sisintany dia mifototra amin'ny angona misy, porofo ara-tsiansa ary fanaraha-maso ny toe-javatra epidemiolojika na any Canada na iraisam-pirenena. Ny fitomboan'ny valim-panadinana miabo COVID-19 dia voamarina amin'ireo mpitsangatsangana tonga any Kanada avy any Maraoka tao anatin'ny iray volana lasa izay.
Miorina amin'ny torohevitra farany momba ny fahasalamam-bahoaka avy amin'ny Public Health Agency of Canada, Canad fitateranaa dia mamoaka Fanamarihana amin'ny Airmen (NOTAM) mametra ny sidina mivantana rehetra momba ny sidina sy ny mpandeha mivantana mankany Canada avy any Maraoka manomboka ny 29 Aogositra 2021, amin'ny 00:01 EDT hatramin'ny 29 septambra 2021, amin'ny 00:00 EDT. Ny sidina mpandeha mivantana ara-barotra sy tsy miankina rehetra mankany Canada avy any Maroc dia iharan'ny NOTAM. Ny fampandehanan-draharaha fotsiny, ny famindrana fitsaboana na ny sidina miaramila dia tsy tafiditra ao.
Mba hiantohana ny fiarovana ny fiaramanidina sy hampihenana ny fanelingelenana miasa, ny sidina avy any Maroc izay efa mandeha mandritra ny famoahana ny NOTAM dia avela hiroso mankany Canada. Ho fepetra vonjimaika, mandra-pahatongan'ny NOTAM manan-kery, ny mpandeha rehetra tonga amin'ireo sidina ireo dia takiana amin'ny fitsapana rehefa tonga any Canada.
Ny Transport Canada koa dia manitsy ny baiko vonjimaika momba ny fepetra takiana amin'ny fiaramanidina sivily noho ny COVID-19, mifandraika amin'ny fitsapana molekiola COVID-19 tany amin'ny firenena fahatelo mba hampidirana ireo mpandeha any Canada avy any Maraoka amin'ny alàlan'ny làlana tsy mivantana iray. Midika izany fa ny mpandeha izay miainga avy any Maroc mankany Canada, amin'ny alàlan'ny làlana ankolaka iray, dia takiana mba hahazoana fitiliana mialoha ny fiaingan'ny COVID-19 avy amin'ny firenena fahatelo - ankoatran'i Maroc - alohan'ny hanohizany ny diany mankany Canada. Ny fepetra takiana amin'ny firenena fahatelo dia hanomboka amin'ny 29 Aogositra 2021, amin'ny 00:01 EDT.
Manohy manara-maso akaiky ny zava-misy i Canada, ary hiara-miasa akaiky amin'ny Governemantan'i Maroc sy ny mpandraharaha ny seranam-piaramanidina mba hiantohana ny fametrahana ny fomba mety mba hamerenana amin'ny laoniny ny sidina mivantana raha vantany vao mamela izany.
Ny famerana ny sidina avy amin'ireo firenena misy ahiahy dia ampahany amin'ny fomba fiasa ankapobeny any Canada amin'ny fitantanana tompon'andraikitra sy mahomby amin'ny drafitra fanokafana ny sisintany any Canada.
Manoro hevitra ny Kanadiana hialana amin'ny dia lavitra tsy ilaina any ivelan'i Kanada - ny fitsangatsanganana iraisampirenena dia mampitombo ny loza mety hitranga, ary ny fiparitahan'ny COVID-19 sy ny karazany hafa. Ny fepetra sisin-tany koa dia miova hatrany rehefa mivoatra ny toe-javatra epidemiolojika.